You na-arụ ọrụ na ngalaba na-edeba aha ma ọ bụ a Reseller? | Martech Zone
Echiche nke onye ọchụnta ego na-atụ egwu onye isi
Ebe ọ bụ na anyị na ndị na-achụ ego na-arụ ọrụ ntakịrị, ha na-arịọ anyị mgbe ụfọdụ ka anyị rụọ ụfọdụ ọrụ na mpụga iwu maka ụlọ ọrụ. Otu onye ọchụnta ego anyị na-arụ ọrụ na-ewe anyị n'ọrụ oge ụfọdụ iji mee ka ịzụrụ ngalaba ha. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma ịnwe ụlọ ọrụ oge na-arụ ọrụ maka usoro ndị a ebe ọ bụ na ọ bụ ntakịrị mkparịta ụka na nnukwu ego na-aga n'etiti ndị ọzọ.
Usoro a pụtara n’ihu. Anyị na-eji akaụntụ escrow nke atọ nke na-egosi na anyị etinye ego maka ndị ọzọ na mgbe ahụ anyị na-enye ikike ịhapụ ego mgbe anyị nwetara nwe aha ngalaba. Ọ bụrụ na ụdị nghọtahie ọ bụla emee, nkwekọrịta ahụ ga-abanye na mkpezi. Nke a na - akwụsị azụmaahịa azụmaahịa na - enweghị isi na - eme.
Izu ole na ole gara aga, anyị kparịtara zụta ngalaba site na ndị otu nzuzo. Edenyere ngalaba ahụ aha Yahoo! Obere Ahia… Ma obu anyi chere.
Anyị debere ego ahụ na nzuzo ma mgbe ahụ ọchị malitere. Anyị nyeere ndị ọzọ aka unlock kpọghee ekwt ngalaba na ikike nyefe nke ngalaba anyị ahịa si ngalaba na-edeba aha. Nke a bụ usoro dị mfe ma ọ bụrụ na ị maara ihe ị na-eme, ọ na-ewe oge dabere na ngalaba na-edeba aha.
Achọpụtara m ndị ahịa na ndị na-ahụ maka ngalaba nkeonwe na-esote ụtụtụ ma ọ nweghị ihe gbanwere. N'echi m enyocha ọzọ na nyefe bụ kagbuo. Akpọrọ m ndị otu na ọ sịrị na ya emebeghị ihe ọ bụla.
M guzobere ogbako oku ma anyị kpọrọ ndị na-akwado nkwado Yahoo! Mgbe anyị chere obere oge, ezutere anyị na teknụzụ nkwado nke kwuru na anyị enweghị ike ịnyefe ngalaba ahụ na mpụga, mana ọ bụrụ na m nwere Yahoo! Obere Akaụntụ akaụntụ, anyị nwere ike ịnyefe ngalaba na akaụntụ gaa na akaụntụ.
Ọ bụrụ na ị zụtala ma ọ bụ ree ngalaba… ntị gị nwere ike ịbụ naanị na nke a. Mgbe ton nke ngalaba mbufe esemokwu, ICANN chịkwaa usoro a iji hụ na ị nwere ike ịnyefe ngalaba dị mfe site na otu onye na-edeba aha ọzọ. Emere nke a iji hụ na ụlọ ọrụ ndebanye aha ngalaba enweghị ike ijide ndị ahịa ha.
Nke a bụ ajụjụ m jụrụ na Yahoo! onye nnochite anya onye nkwado mana ọ dị ka ọ ghọtaghị mbido ajụjụ a ka anyị wee na-aga. Nke a bụ mgbe ọ malitere ịtụ ụjọ.
M debara aha Yahoo! Obere azụmahịa na akaụntụ m ahịa mgbe na ekwentị na ma anyị nke atọ na ndị Yahoo! onye nnochite anya Onye nnọchianya ahụ gwara ndị ọzọ ka ha kagbuo akaụntụ ya ka enwere ike ịtọhapụ ngalaba ahụ ka m debanye aha ozugbo iji weghachite ya.
Kedu?! Ya mere, anyị ga-etinye ngalaba a na ahịa maka minit ole na ole wee debanye aha ya ọzọ?! Gịnị ma ọ bụrụ na anyị efunahụ ngalaba na mgbe ahụ na ụfọdụ nkọ domainer si n'ebe na-akpaghị aka ịzụta usoro?! (Amaghị m ma ọ bụrụ na nke ahụ dị adị, mana enweghị m ike ikwenye arịrịọ ahụ). Ajụrụ m onye nnọchianya ahụ ma mesie m obi ike na ọ ga-achịkwa ngalaba ahụ.
Ya mere, anyi weputara ihe na-eme ka m debanye aha ya na ohuru ohuru nke onye ahia m. Obere Akaụntụ Akaụntụ.
Ma ọ bụ ka m mere?
Otu ụbọchị mgbe e mesịrị, na ngalaba ahụ ka nọ na akaụntụ nke atọ ma na-egosi na nke m mana agbanyeghị ya kpamkpam. N'oge a, emere m nyocha na a WHOIS anya ịhụ ozi ọha na eze metụtara na ngalaba. O doro anya na ọ kwuru na ngalaba ahụ ka edenyere aha ya na ndị ọzọ. Ma, ebe a bụ ihe iju akụkụ… ngalaba na-edeba aha abụghị Yahoo! Obere Business, ọ bụ Melbourne IT na Australia.
M tinyere tiketi n'ime Melbourne IT na ha dere azụ otu ụbọchị mgbe e mesịrị na ha bụ ezigbo onye na-edeba aha na Yahoo! Obere azụmaahịa bụ naanị ndị na-ere ahịa. Arghhhhhh! Oge ahụ niile bụ ihe efu.
Yabụ, anyị malitere usoro nnyefe ngalaba na Melbourne IT. Ogologo akụkọ dị mkpirikpi, ha nwekwara usoro mgbagwoju anya ebe ị na-enweghị ike ịkwaga ngalaba site na otu akaụntụ gaa na ọzọ. Na-akpali onye nwe akaụntụ ahụ n’aka otu onye ọzọ. Emere m nke ahụ ma kwụọ ụgwọ ọzọ (Amaghị m ihe m kwụrụ na Yahoo! Obere azụmahịa).
N'ebe a, anyị bụ izu ole na ole ka e mesịrị ma ekwenyere m na anyị enwetala ngalaba ahụ n'ikpeazụ. Nkwupụta ọhụụ m kwuru na ọ ga-ewe ụbọchị 7 iji mechaa ya ka anyị nwee isi ọma!
Isi okwu dị ebe a bụ na ịkwesịrị ilezi anya ebe ị na-edebanye aha ngalaba gị. Usoro ahụ, enweghị akwụkwọ, nkwado amaghị ihe na ọbụlagodi usoro ahụ, ekwenyere m, mebiri iwu ICANN, na-akụda mmụọ ma na-atọ ọchị. Obi abụọ adịghị m na usoro ahụ nwere ike ịdịrịrị mfe ma ọ bụrụ na edebanye aha ngalaba ahụ na onye na-edeba aha kama ịre ahịa.
Nke ka mma, soro na GoDaddy. Ọbụghị naanị na ị ga - ezere nsogbu ndị a, ị ga - etinyekwa obere ego ma nweta nnukwu ọrụ ndị ahịa.
Tags: zụta ngalaba ahaịzụ ngalaba ahaescrowmelbourne yaMelbourne ya na ngalabayahooyahoo ngalaba na-edeba ahayahoo ngalaba
Mee 14, 2015 na 7: 54 AM
M malitere oru ngo ebe m na-akwagharị onye ahịa nke ọma site na Yahoo obere azụmahịa gaa Godaddy, oge zuru oke. Ajuju m kwesiri ikwusi igbali igabiga Yahoo obere ahia ma soro Melbourne IT kwurita okwu? Ọzọkwa, iche na ihe niile na-aga nke ọma, ọ dị ka ị ga-enwe njikwa zuru oke nke ngalaba ahụ na Melbourne IT kpamkpam na foto a? Naanị iche ma ọ bụrụ na anyị ga-ahapụ ngalaba aha ebe ahụ, kama itinye ihe egwu na oge ma ọ bụghị.
Mee 15, 2015 na 12: 53 AM
Hi Jon, n'eziokwu na ahụmahụ ahụ dị oke egwu (na Melbourne's Domain interface adịghị arụ ọrụ na Chrome), esi m ebe ahụ. A na-ebufe ngalaba ahụ (mkpịsị aka gafere) ugbu a.
Mee 17, 2015 na 4: 52 PM
Daalụ maka azịza Doug! Ana m atụ anya mmelite na nke a. Mụ na ndị ahịa ọzọ ejiri m n'aka ha wee họrọ m idobe ha ebe ahụ n'ihi nsogbu a. Ma ọ dịkarịa ala, enwere m olileanya na ndị mmadụ na-ahụ post blọgụ a ma họrọ ịghara ịmalite ntọala ha site na obere azụmaahịa Yahoo. Ekwenyesiri m ike na inye onye ọ bụla nwere azụmaahịa ikike ịchịkwa akụ ha. Ọtụtụ oge ndị mmadụ anaghị amata ọrụ aka nke itinye aka na ụlọ ọrụ na-eme ihe kwesịrị ịbụ ego, mfu, mgbe ha họọrọ ịchọta ụlọ ọrụ ọzọ.
Feb 2, 2016 n’elekere 3:59 nke abali
Ma mụ onwe m, ọ masịrị m Whois Ọzọ